အရောင်းအ ၀ ယ်စနစ်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်စားသုံးသူများပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်, ကုမ္ပဏီပြန်လာနှင့်လဲလှယ်စနစ်ကအကောင်အထည်ဖော်. ပြန်လာခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီပြီးပြန်လည်ပတ်ရန်သို့မဟုတ်လဲလှယ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည့်ဖောက်သည်များ, ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာပါ (အထူးထုတ်ကုန်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအခြားပြန်လာနှင့်လဲလှယ်စနစ်များမှလွဲ။):
ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကိုဝယ်ယူသောဖောက်သည်အားလုံး, မသက်ဆိုင်ပေးပို့နည်းလမ်းနှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း၏, ပြဌာန်းချက်အရသိရသည်ကုန်ပစ္စည်းများပြန်လာနှင့်လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်.
1) အရည်အသွေးပြproblemsနာများနှင့်အတူထုတ်ကုန် (ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရည်အသွေးပြproblemsနာများအတွက်တာဝန်မရှိပါ).
the ကုန်ပစ္စည်းအထုပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသည် (ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပထုပ်ပိုးအပါအဝင်), နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအသစ်နှင့်အသုံးမပြုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်၏မူလပြည်နယ်ဖြစ်သင့်သည်, နှင့်သင်ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိသည့်အခါကဲ့သို့တူညီသောပြည်နယ်, အရာအလယ်တန်းရောင်းအားမထိခိုက်ပါဘူး;
the တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်သည်, မူရင်းထုပ်ပိုးသေတ္တာနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပေးပို့အထုပ်ပြန်လာပါ, အဖြစ်အားလုံးဆက်စပ်ပစ္စည်း, တံဆိပ်များ, ကုန်ကျစရိတ်, ထုတ်ကုန်လက်မှတ်, ညွှန်ကြားချက်များ, ငွေတောင်းခံလွှာများ (ရှိလျှင်) အားလုံးလက်ဆောင်တွေ (ရှိလျှင်).
သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်းသင်ပြန်လာသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းလျှင် (ရှိလျှင်) ကောင်းသောအခွအေနေဖြစ်အတည်ပြုနေကြသည်, နှင့်တံဆိပ်များ, ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်လက်ဆောင်များ (ရှိလျှင်) ပြည့်စုံပြည့်စုံသော, ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင်ကုန်ပစ္စည်းအတွက်သင်ပေးခဲ့သည့်ငွေကိုဥပဒေအရပြန်လည်ပေးလိမ့်မည်.
returned အကယ်၍ ပြန်လည်ရရှိသောကုန်ပစ္စည်းများသည်ဤပြန်လည်ပတ်မှုနှင့်လဲလှယ်ရေးမူဝါဒ၏အခြေအနေနှင့်မကိုက်ညီပါက, ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှသင်၏ပြန်လာခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ငွေပြန်အမ်းငွေကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ.
the ငွေတောင်းခံလွှာကိုသင်ပြန်ပို့ရန်ပျက်ကွက်လျှင်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လက်ဆောင်များ (ရှိလျှင်), ကုမ္ပဏီသည်ငွေတောင်းခံလွှာအခွန်၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုနှုတ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်, သင်လုပ်ခဲ့သောငွေပေးချေမှုမှဆက်စပ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လက်ဆောင်များ.
you ငွေတောင်းခံလွှာကိုသင်ပြန်မပေးပါ, အမိန့်တစ်ခုအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်လက်ဆောင်များ, သို့သော်ကုမ္ပဏီမှငွေတောင်းခံလွှာအခွန်၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုနှုတ်မထားဘူး, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လက်ဆောင်များ, သို့မဟုတ်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးများနှင့်ပစ္စည်းများပြန်လည်ပေးပို့ရန်မလိုအပ်ပါ, ကုမ္ပဏီသည်သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများကိုကုမ္ပဏီမှပယ်ဖျက်သည်ဟုမှတ်ယူခြင်းမပြုရ.
ust ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏အရောင်းအ ၀ ယ် hotline သို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်.